Isixhumanisi Esinyene: Kusho Ukuthini Kwi-TikTok? | XperimentalHamid
Isixhumanisi Esisangene: Kusho Ukuthini Kwi-TikTok?
Kwangathi 8, 2021 by USasha Gohar
Abantu abaku-inthanethi banolimi lwabo. Noma ngubani osenesikhathi esanele kumasayithi amaningi okuxhumana nabantu, angavumelana nami ngale akhawunti.
Abantu ezinkundleni zokuxhumana bakhuluma bodwa ngazo zonke izinhlobo zamagama amasha. Kubukeka sengathi laba bantu basuthi yilutho olukhona.
Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kubo bonke abantu abayizinkulungwane zeminyaka obekufanele bazibekele isikhala ezweni abangazange balidale.
Kepha uma kukhulunywa nge-inthanethi, isizukulwane esisha sinakho konke esikushoyo. Kungaleso sizathu-ke ama-slang lawa asetshenziswa yilaba bantu engabalulekile kubantu abavela ezizukulwaneni ezidlule.
Sisho Ukuthini Isixhumanisi Esishubile ku-TikTok?
Isixhumanisi Esishubile TikTok Umsuka:
Ithemu elisha selithathe i-inthanethi - ikakhulukazi iTikTok - ngesiphepho. Leli gama livame ukuthandwa phakathi kwezinkulungwane zeminyaka. Bayisebenzisela ukuzihlukanisa nabanye.
Kungaleso sizathu-ke abanye abantu abaningi bengayitholi le slang nut elula yokuqhekeka. Ukuqonda ukuthi leligama lisho ukuthini kwenze abantu abaningi bahamba lapha nalaphaya ngaphandle kokubuyisa.
Uma uzibheka phakathi kwenkatho edidekile, ufike endaweni efanele.
Kulokhu okuthunyelwe ngizokhuluma ngama-slangs asetshenziswa kwi-intanethi. Ukugcizelela kwami ​​okukhethekile kuzogxila ethemini elilodwa 'isixhumanisi esikhohlisayo'. Ezindimeni ezingezansi ngizokutshela ukuthi leli gama lisho ukuthini.
Ngakho qhubeka ufunda.
Abantu abanentshisekelo banolimi lwabo. Basebenzisa amagama ahlulekayo ukuqondwa ngabantu abajwayelekile abangachithi isikhathi sabo esiningi kwi-inthanethi.
Ulimi olusetshenziswa ngabanethiwekhi, lubenza bahluke kubantu abangasebenzisi i-intanethi kangako.
I-Sneaky Link iyathrenda ku-inthanethi. Ngenxa yokuthi leli gama lisetshenziswa kanjani, abantu abazi ukuthi lokhu kusho ukuthini.
Nakhu ngizokwenza kube lula kuwe.
Isixhumanisi Sneaky sisho nje ukuthi othile uxhumana nomunye umuntu ngasese futhi. Lokhu ngamafuphi yigama lokuphola elisetshenziswa izinkulungwane zeminyaka.
Abanye baye bemba bajula bathola enye incazelo kuleli gama. Isibonelo, abanye abantu babheka i-Sneaky Link njengesixhumanisi esenziwa ngemuva komlingani. Ngamanye amagama, kuyigama elisetshenziselwa umuntu okopelayo.
Leli gama lisetshenziswe kaningi ku-inthanethi - ikakhulukazi kuTikTok. Abanye baze babamba iqhaza ezimfashinini ezihlobene naleli gama kuphela.
Kula mavidiyo, kudlalwa ingoma ngemuva ngenkathi abantu benza izinto ezahlukene kuvidiyo efanayo.
Lapha ungafunda Amagama Omsebenzisi Angajwayelekile eTikTok Awathathwanga
Njengasempilweni yangempela, lonke igama ku-intanethi linencazelo yalo ehambisana nezimo noma imvelaphi, igama lesixhumanisi elihlekisayo linomsuka.
Konke lokhu kuqale ngengoma eyenziwe yi-HXLLYWOOD ngegama elifanayo elithi 'Sneaky Link'. Kuleli culo, umculi wezwi uzwakala ephinda igama elifanayo kaninginingi.
UTikTok uthathe umsindo wale vidiyo yomculo futhi wayilayisha ngaphansi kwesitayela esithi 'Sneaky Link'. Umkhuba ufinyelele esiqongweni sawo okwamanje kepha unamandla okufinyelela lapho.
Ingoma ye-Sneaky Link TikTok isetshenziswa ku-TikTok kaningi futhi abantu bayayithanda.
Kulokhu okuthunyelwe, ngikhulume ngomkhuba we-'Sneaky link 'osugcwalise i-TikTok. Ngichaze nencazelo yaleli gama.
Ngaphandle kwalokho konke, imvelaphi yalo mkhuba iphinde yaxoxwa ngokuningiliziwe. Ngiyethemba ukuthokozele ukufunda nge 'Sneaky Link'.
Izigaba I-Tiktok Amathegi Sneaky Link TikTok Umsuka, Kusho Ukuthini Isixhumanisi Sneaky on TikTok Imeyili kwemikhumbi
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2758 - 2759
I-TikTok Photo Edit Trend: I-Trend entsha ku-TikTok